माथि 10 कारणहरू किन्न Abacre नगद दर्ता
Abacre ई कमर्स
Abacre नगद दर्ता
माथि 10 कारणहरू किन्न Abacre नगद दर्ता
यो अर्को पुस्ता नगद दर्ता सफ्टवेयर संग पूर्ण नियन्त्रण पान!
होटल मालिक, तपाईं होटल उद्योग मा ठूलो प्रतियोगिता को चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी राम्रो ग्राहक सन्तुष्ट? कसरी बढी कुशलतापूर्वक आफ्नो व्यवसाय चलाउन? कसरी सर्वोत्तम निर्णय लिन? चिन्ता वृ ठूलो छ। Abacre नगद दर्ता यो चुनौती लिन मदत गर्न सक्छ जो तपाईं समाधान को प्रस्ताव छ।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ समय र पैसा बचाउन खरीद गरेर Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ मार्गदर्शन समय स्वचालन द्वारा कार्य खपत प्रतिस्थापित संग Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ विस्तृत तथ्याङ्क रिपोर्ट आफ्नो कारोबार गतिविधि विश्लेषण भन्ने प्रस्ताव Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ वास्तविक समय सही जानकारी मा आफ्नो व्यापार निर्णय निर्माण द्वारा प्रदान Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ टिकट मुद्रक, नगद दराज, नयाँ प्रदर्शन (पोल), टच स्क्रीन, बारकोड पाठक जस्तै कुशलतापूर्वक धेरै हार्डवेयर उपकरणहरू प्रबन्ध (बार कोड स्क्यानर) स्थापना Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि र पछाडि कार्यालय संग अभिन्न प्रणाली फाइदा उठाउन को Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ चेकआउट ग्राहक अनुभव छिटो र राम्रो सेवा दिन प्रयोग गरेर Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ धोखाधडी कम गर्न आफ्नो कर्मचारीहरु कर्तव्य अलग्गै छुट्टिएर समूह बनाउँदैनन् सुरक्षा मापदण्डहरु को लागू गरेर Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ नियन्त्रणमा काम आफ्नो होटल छोड संग Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ किफायती डिजाइन व्यक्तिगत को Abacre नगद दर्ता व्यापार समाधान।
अंग्रेजी , अफ्रिकी , अल्बेनियन , अरबी , आर्मेनियाली , आजरबाइजानी , बास्क , Belarusian , बङ्गाली , बोस्नियाली , Bulgarian , कातालान , Cebuano , चिनियाँ (सरलीकृत) , चिनियाँ (परम्परागत) , क्रोएशियाई , चेक , डेनिस , डच , एस्पेरान्तो , इस्तोनियन , फिलिपिनो , फिनिस , फ्रान्सेली , गलिसियन् , Georgian , जर्मन , ग्रीक , गुजराती , हैटियन Creole , होउसा , हिब्रू , हिन्दी , ह्मोङ , हंगेरी , Icelandic , ईग्बो , इन्डोनेसियाली , आइरिस , इटालियन , जापानी , जाभानिज , कन्नड , खमेर , कोरियन , Lao , लातवियाई , लिथुएनियन , म्यासिडोनियाली , मलाया , मालटिस् , माओरी , मराठी , मङ्गोलियाको , नेपाली , नर्वेजियन , फारसी , पोलिस , पोर्तुगाली , पंजाबी , Romanian , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu
Copyright © 2015 Abacre Limited । All rights reserved.